टिभी पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको रहस्यमय एक मृत्यु र उठेका प्रश्नहरु अनेक
-टिभी पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको रहस्यमय एक मृत्यु र उठेका प्रश्नहरु अनेक
सुरेन सापकोटा/अगस्ट १७, २०१९
शालिकरामको सर्जिमिन मुचुल्का सार्बजनिक गर्दै प्रहरी स्वयमले मृतकको ढाड, कम्बर र खुट्टामा रडले हानेको प्रशस्तै डामहरु रहेको उल्लेख गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
तर पोष्टमार्टमको प्रतिवेदन आउँनु अघावै चितवन प्रहरीले आत्महत्या भनेर जिकिर गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको पनि देखियो। यसरी पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आउँनु अघावै आफ्नै सर्जमिन मुचुल्काको खिलाफ हुनेगरि ‘आत्महत्या’ भनेर भन्न मिल्ला?
शालिकरामले बोलेको भिडियोमा क्यामेरामा नहेरेर तलपट्टि हेरेको देखिन्छ। फेसबुक लाईव होस या आफ्नै भिडियो खिच्दा होस मान्छेले क्यामरामै हेर्नुपर्ने हो। उनको आँखा र बोलीको शैली हेर्दा लिखित बिषयबस्तु पढदै छन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। उनले बेलाबेला दायाँबायाँ पल्याकपुलुक हेरेका छन।मानौं दायाँबायाँ कोहि मान्छे छन।
उक्त भिडियोको उनान्साठ्ठी सेकेन्डसम्म शालिकरामको पछाडीपट्टि केवल नांगो पलंग मात्र देखिन्छ, १ मिनेटपछि उनी एकाएक फ्याट्ट सिरानी (तकिया) मा देखिन्छन। यो भिडियो ईडिटेड हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। एडिट कसले किन गर्यो, र एकाएक तकिया कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक र जायज हैन र?
उनको क्यामरामा आँखा जुद्धा रबि दाई भनेर आदरपुर्बक सम्बोधन गर्छन भने क्यामराबाट तल हेरेको समयमा रबि तँ भनेर अनादर भाषामा अपराधी होस भनेर सम्बोधन गरेको देखिन्छ। आँफै बोल्दा आदर र लेखिएको बिषयबस्तु पढदा अनादरभाव देखिएको हो कि ?
भिडियोको ७:४३ मिनेटमा क्यामरा हल्लिएको समयमा शालिकरामको देब्रे काँधपट्टि खैरो रंगको हाफ टिसर्ट लगाएको अर्को अपरिचित मानिसको पाखुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । मृत्युबरणको भिडियो बनाउँदा अर्को कुनै ब्यक्ति पनि त्यहाँ उपस्थित थियो? त्यसैगरी शालिकरामको देब्रे आँखामा ऐनामा झैं टल्किएको पुर्णकदको मानव स्वरुप कतै भिडियो खिच्ने मान्छेकै त होईन? आँखामा त्यस्तो प्रतिबिम्ब कसरी देखियो ?
शालिकरामको बाचनकै क्रममा भिडियोको ७:४५ मा किन भन्ने नौलो आवाज प्रष्ट सुनिन्छ। जुन शालिकरामको होईन भन्ने कुरा जो कोहिले अनुमान लाउँन सक्छ। उनी एक्लै थिए भने त्यो चर्को आवाज कसको हो?
शालिकरामले शुरुतिर डेढलाखको कमाई छोडेर रबिको करकापमा पन्द्रहजारको जागिर खाएको तथा किस्ता तिर्न नसकेको उल्लेख छ। पछि आफ्नो करोडौंको सम्पति छ तिमीले नै भोगचलन गर्नु भनेर श्रीमतीलाई सम्बोधन गरेको सुनिन्छ। कसैको करकापमै परेर त्यत्रो कमाई छाडेर नाथे पन्द्रहजारमा आँफूलाई घोक्र्याएर मुन्ट्याएर अपमान गर्दै काममा जोताउँनेको प्रशंसा गर्दै लुरुलुरु बँधुवा मजदुर जस्तो काम कसैले गर्ला आजको खुल्ला समाजमा ?
भिडियोमा शालिकराम सेतो भित्री गन्जिमा मात्र देखिन्छन भने झुन्डिएको अवस्थाको तस्विरमा सर्ट र पाईन्टमा चिटिक्क देखिन्छन । के आत्महत्या गर्ने समयमा घाउचोट लागेको शरिरमा राम्रा पोसाकमा सुसज्जित भए होला त ?
मृतकको कोठाको झ्याल कुनै पनि मानिस सजिलै छिर्न र निस्कन सक्ने प्रकारको खुल्लै अवस्थामा रहेको भेटिएको कुरा सर्जमिन मुजुल्काका बखत प्रहरी र परिवारको छलफलको भिडियोमा प्रष्ट उल्लेख भएको छ । उनको आत्महत्या भन्दा पनि हत्या हो कि भन्ने कुरामा खुल्ला झ्याल र त्यहाँ देखिएको अपत्यारिलो दृश्य नै प्रमुख होईन र ?
मृतकको शरीरभरि चोटपटकका दृश्यहरु प्रशस्तै देखिन्छन। आत्महत्या गर्नेले आँफैले आँफैलाई किन र कसरि चोटपटक लाउँन संभव होला र ?
शालिकरामले सोहि दिन पनि सड़क छेउमा बासी खाना बेच्ने होटलका बारेमा फिल्ड रिपोर्टिङ गरेका थिए । जुन भिडियो आज पनि युटुबमा छँदैछ । योजनाबद्ध आत्महत्या गर्ने मानिसले त्यो उत्साहका साथ रिपोर्टिङ गर्छ ?
केहि दिन अघि ओएस नेपाललाई दिएको अन्तर्वार्तामा रबि लामिछानेप्रति ठुलो सम्मान र प्रसंशा जाहेर गरेको देखिन्छ भने गएको गुरु पूर्णिमामा रबि नै मेरो गुरु हो भनेर फेसबुकमै स्टाटस हालेका थिए । त्यसो त उनको फेसबुक अकाउन्टको कभर र प्रोफायल तस्विरमा रबि लामिछानेको तस्विर अझै पनि देख्न सकिन्छ ।
पुडाशैनीको कार्यक्रम हेर्ने र अझ नजिकबाट चिनेजानेकाहरुले उनी त्यसरी कायर भएर आत्महत्या गर्ने मान्छे नभएर निडर, हक्की, र सत्यका पक्षमा मरिमेट्ने राष्ट्रलाई माया गर्ने एक कुसल पत्रकार भनेर चिन्थे । उनलाई डिप्रेसन भएको भए पनि उनका सहयात्री र सहकर्मीलाई त केहि कुरा थाह हुनुपर्ने होईन र ?
शालिकरामले भिडियोमा आँफुलाई फसाउँन खोजिएका कारण आत्महत्या गर्ने निर्णय लिएको भनेका छन । कसैले खाँदै नखाको बिष तलाई लाग्छ भन्दैमा अथवा उनले नगरेको गल्तिमा कसैले फसाउँछ कि भन्दैमा आत्महत्या गर्ने निर्णयमा उनी कसरि पुग्ला ?
चितवन प्रहरीले शालिकराम होटेलको कोठामा मृतावस्थामा झुण्डिएको भेटिएको उल्लेख गर्दै मृतकका साथमा भएको मोबाईल फोन र वालेट नियन्त्रणमा लिएर फरेन्सिक जाँचको लागि काठमाण्डौ पठाएको जनाएको थियो।तर उक्त मोबाईलमा कैद गरिएको भनिएको मृतक शालिकरामको भिडियो नेपालमा चलेको एक साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादकले ‘नेपाल आज’ नामक अनलाईन मार्फत पहिल्यै सार्बजनिक गरिदिए। यस घटनाले उक्त भिडियो पहिला प्रहरीले भेट्यो या उक्त साप्ताहिकका सप्पादकले भन्ने बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।
यस बिषयमा चितवन प्रहरी स्वयमले २०० प्रतिशत प्रहरीले लिक गरेको होईन भनिसकेका छन। एकातिर भने अर्कोतिर भने भिडीयो सार्बजनिक गर्ने नेपाल आजले आवश्यक परे प्रहरीलाई भिडियो दिन तयार छौं भनेको छ। यसबाट भिडियो प्रहरीले भन्दा पहिले मिडियाले पाएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न र ? अथवा यी र यस्ता यावत घटनाक्रम, प्रश्न, आशंका तथा यसमा संलग्न पात्रहरु नै प्रारम्भिक अनुसन्धानको दायरामा पर्दैनन् र ?
आज शालिकराम पुडाशैनीको रहस्यमय मृत्युका सन्दर्भमा यस्ता कैयौं प्रश्नहरु उठेका छन र उठछन् नै । लेखक कुनै अनुसन्धान अधिकृत या साक्षी केहि पनि होईन तर समाजको एउटा सचेत सदस्य भने पक्कै हो। त्यसकारण यो एउटा शंकाको घेराले बनेको धरहरा जस्तो दु:खद घटना हो।